Tonga an-tanindrazana…: Hanolotra seho roa ny tarika Njava | NewsMada
Tonga an-tanindrazana…: Hanolotra seho roa ny tarika Njava
Mpiray tampo samy mpanakanto, nandrafitra ny tarika malagasy anisan’ny malaza indrindra eran-tany izy ireo. Tsy manadino ny eto an-tanindrazana anefa ry Njava.
Efa an-taona maro no tsy tafaraka niaka-tsehatra teto an-tanindrazana ny tarika Njava. Teo hatrany anefa ny faniriana hanatontosana izany, saingy tsy nety nifanojo mihitsy ny fotoana mampalalaka ny mpikambana tsirairay. Fantatra kosa anefa izao, fa ho tafaraka eto an-tanindrazana avokoa izy enina mianadahy izay mandrafitra ny tarika, amin’ity volana desambra ity.
Araka izany, hisy ny seho hataon-dry Monika, Lala, Dozzi, Maximin, Dàdà ary Pata ao amin’ny IFM Analakely, ny zoma 15 desambra ho avy izao, manomboka amin’ny 7 ora hariva. Vantany vao naheno izany vaovao izany anefa ireo mpankafy, dia maro ireo naneho ny fahavononana ny hijery, ka azo antoka fa tsy hantonona ny efitra. Avy hatrany dia nandray fanapahan-kevitra ny hanao seho faharoa, ao amin’ny IFM ihany, ny 16 desambra ny tarika.
Tsy tena hitovy tanteraka, satria hampihanoka mozika mandritra ny tapany voalohany amin’ny seho voalohany i Miary Lepiera. Hizaran’ny tarika Njava manontolo ny sanganasany kosa ny seho faharoa. Hatolotr’izy mianadahy avy ho fahatsiarovana ny rainy, izay nandovany ny talenta sy ny anaran’ny tarika ireto fiarahana ireto.
“Tsy hisy hira vaovao halahatra amin’ity, fa aleo ireo taloha nahafantarana ny tarika sy tadiavin’ny mpankafy hatrany no homena azy amin’ireo”, hoy ny fanazavan’i Lala Njava, omaly.
Tsy matetika no tafavory eto an-tanindrazana ny tarika noho ny fisian’ireo monina any ivelany. Na izany aza, manaraka akaiky ny fivoaran’ny mozika, ary mandray anjara amin’izany izy ireo. Anisan’ny tetikasa efa andalam-panatanterahana, ohatra, ny fananganana “studio”, izay anjara birikin’ny tarika Njava amin’ny fanohanana ireo mpanakanto malagasy. Hisy izay rehetra ilaina, ary hitondran’izy ireo ny traikefa hitany maneran-tany ao. Misokatra amin’ny karazan-kira rehetra izy ireo, ary efa nivonona amin’ny fitaovana raitra sy manara-penitra takian’ny tsenan’ny mozika iraisam-pirenena. Manomboka amin’ny torohevitra hatramin’ny fanatontosana ary ny fanarahana ny mpanakanto eo amin’ny tsean’ny mozika, hiandraiketan’io “studio” io avokoa.